သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ချုပ်အပ် -> စက်မှုအပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စက်မှုအပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Point: spî / Kn / BP ရေနံကုမ္ပဏီက / Suk
Size: 9/16 ~ 65/100 ခန့်
Equivalent Systems: 151X21, SY1431
machine: Overlock စက်
အဆိုပါဝိသေသကွေးပုံသဏ္ဍာန်နှင့် groove မှာလက်ဝဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကွေးပုံသဏ္ဌာန်အထူးသဖြင့်ချုပ်ချော် minimize တယ်။ ချောထည် Shanks ၏ edging ကျော်အပ်ချုပ် 1 ဘက်မှာပြားများအတွက်ဒါဟာသင့်လျော်သည်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 151X21, SY1431 ။
size: 9/65 ~ 14/90
Equivalent Systems: FLX118GAS, SY7060, FLX118A
machine: InterlockProtocol ကို Chainstitch စက်
ဒါဟာလေးခုတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကြောင့်သိပ်သည်းဆမြင့်မားမှု / အထူရေငုပ် -suits, စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်, သိုးမွှေးထိုးနှင့် elastic သည့်ပစ္စည်းများအပေါ်အပ်ချုပ်များအတွက်သင့်လျော်မယ့်ခြောက်ခုဟာ Thread စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ B942-2-52.The နှင့်ညီမျှစနစ်များကိုထည့်သွင်းလျက်, ညီအစ်ကို-B941-1-52, B941-1-60, B942-1-52 အဖြစ်အပ်ချုပ်စ​​က်အမျိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီ: FLX118GAS, SY7060, FLX118A ။
Equivalent Systems: FLX118GBS, SY7061
ဒါဟာ InterlockProtocol ကိုစလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်ကိုအဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါအပ်နဖားကိုထိပ်တန်းအဖုံးအပ်ချည်ရှိပြီး twill ပိတ်ထည်နူးညံ့နှင့်အလတ်စားလေးလံသောအလေးချိန်ပိတ်ထည်, အတွင်းခံ, အားကစားအတွက်ပြားချပ်ချပ်နဲ့ elastic ချုပ်ရိုးချုပ်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒါဟာ SIRUBA အဖြစ်အပ်ချုပ်စ​​က်ကိုက်ညီလျက်ရှိသည်။ ညီမျှစနစ်များပါဝင်သည်: FLX118GBS, SY7061 ။
Equivalent Systems: FLX118GHS, FLX118GBS Suk
ဒါဟာ InterlockProtocol ကိုစလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်ကိုအဘို့ဖြစ်၏။ အလယ်တန်းပတ်ပတ်လည်မှတ်နှင့်ထိပ်တန်းအဖုံးအပ်ချည်ဖြစ်သည့် Suk ပွိုင့်နှင့်အတူ။ ဒါဟာအတွင်းခံ, အားကစားနှင့် twill ပိတ်ထည်တွင်ပြန့်ပြူးနှင့် elastic ချုပ်ရိုးချုပ်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ ညီမျှစနစ်များပါဝင်သည်: FLX118GHS, Suk FLX118GBS ။
size: 21/130, 22/140
Equivalent Systems: UYX121GBS, SY7284
machine: Chainstitch စက်
InterlockProtocol ကိုစလွယ်ကိုဆွဲ machine.It ရဲ့နှစ်ဦးကို double စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်ချည်ထိုးဘို့ဖြစ်၏။ ဖြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူ Suk ပွိုင့် / အလယ်တန်းပတ်ပတ်လည်ပွိုင့်နှင့်အတူသာယာလှပသောချုပ်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာထည်ပေါ်ချည်ထိုးကြသည်။ ညီမျှစနစ်များပါဝင်သည်: UYX121GBS, SY7284 ။
Equivalent Systems: DVX43, UOX128, UY128GS, 62X43, UY124GS, MY1040
ဆလင်ဒါအိပ်ရာ InterlockProtocol ကိုစက်, မြန်နှုန်းမြင့်ခါးပတ် loop ကိုစက်သည်။ အားကစားကျီ, အတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်လောင်းကုတ်အင်္ကျီအဘို့အသင့်တော်သောသာမန​​်ချုပ်တွင်အပ်ချုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ, ပြားချပ်ချပ်ချုပ်, Lingerie, နှင့် lapping ချုပ်ကျလေ၏ .. ဒါဟာနှစ်ဆကိုသော့ခတ်ထား,2သို့မဟုတ်3တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ခိုင်မာပြီးအလွယ်တကူင် သာ. ကြီးမြတ်သောအလုပ်ကိုလုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုပေးပါနှင့်ပိုပြီးထုတ်လုပ်ဖို့ကူညီ တိကျသောအပ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: DVX43, UOX128, UY128GS, 62X43, UY124GS, MY1040 ။
Size: 08/60 ~ 18/110
Equivalent Systems: UY128GAS Suk
အဆိုပါဝိသေသနှစ်ခု groove နှင့်အလတ်စားဘောလုံးကိုအချက်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ InterlockProtocol ကိုစလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ချုပ်ဇစ်, Jean အတွက်ကောင်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: UY128GAS Suk ။
Point: R / BP ရေနံကုမ္ပဏီက
size: 10/70 ~ 11/75
Equivalent Systems: FLX118GCS, UY118GKS
အဆိုပါဝိသေသ: options နှစ်ခုကိုအပ်နဖားကိုအချက်များကိုရွေးချယ်မှု, က Round မှတ်နှင့် Ball ကိုပွိုင့်နိုင်။ ဟူသည်စံပဝါနှင့်ထစ်နှင့်အတူ Shanks နှင့်အတူပုံဖော်။ ဒါဟာနှစ်ဦး groove ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ InterlockProtocol ကိုစလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။
အဆိုပါအပ်နဖားကိုထိပ်တန်းအဖုံးအပ်ချည်ရှိပြီး twill ပိတ်ထည်နူးညံ့နှင့်အလတ်စားလေးလံသောအလေးချိန်ပိတ်ထည်, အတွင်းခံ, အားကစားအတွက်ပြားချပ်ချပ်နဲ့ elastic ချုပ်ရိုးချုပ်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။
ညီမျှစနစ်များပါဝင်သည်: FLX118GCS, UY118GKS ။
size: 7/55 ~ 9/65
အဆိုပါဝိသေသ: options နှစ်ခုကိုအပ်နဖားကိုအချက်များကိုရွေးချယ်မှု, က Round မှတ်နှင့်ဘောပင်ကိုနိုင်။ ဟူသည်စံပဝါနှင့်အတူပုံဖော်နှင့် notch.The စုစုပေါင်းအရှည်နှင့်အတူ Shanks 41,1 mm.It စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က် use.2 တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အဘို့အစွန်ချုပ်ကျော်4ဟာ Thread, စနစ် UY118GCS အတူတကွကိုသုံးအပ်နဖားကိုနှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ကမဆိုနှင့်ညီမျှစနစ်များရှိသည်ပါဘူးထိုကဲ့သို့သောငုပ် suit.It အဖြစ်, အပ်ချုပ် spandex ထည်အသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။